Ngwakọta ikuku, mkpa na mmetọ ikuku | Network Meteorology
N’ebe a na-eme ihe oriri, e nwere usoro gas ndị na-enye anyị ohere ibi na ịzụlite dị ka anyị na-eme taa. A maara gas a dị ka ikuku. Ikuku bụ ihe dị mkpa dị ndụ n’ụwa anyị a. Ọ bụghị naanị na ọ dị mkpa maka mmadụ, mana maka ndụ ọ bụla nke ihe ọ bụla dị ndụ. Enweghị ike ịgbagha mkpa ọ dị ikuku, dịka mkpa mmiri. Ọ bụghị mmadụ niile maara ihe mejupụtara ikuku anyị na-eku ume na ihe kpatara o jiri dị mkpa.
Nke ahụ bụ ihe anyị nọ ebe a maka taa. N’isiokwu a anyị ga-ekwu maka ya ikuku mejupụtara, ọrụ ndị ikuku na-arụ na mmepe nke ndụ na ihe na-eme na mmetọ ikuku taa.
1 Ngwakọta nke ikuku anyị na-ekuru
2 Noble gas dị ka ihe mejupụtara nke ikuku
3 Ikuku ikuku
Ngwakọta nke ikuku anyị na-ekuru
Mgbe anyị na-eku ume, ọ bụghị naanị na anyị na-etinye ikuku oxygen anyị kwesịrị ịdị ndụ ma na-achụpụ CO2 na-adịghị mkpa site na ahụ. Ikuku anyị na-ekuru bụ nke ikuku gas dị na gburugburu ebe obibi. O doro anya na, mgbe e guzobere ụwa, ihe ndị mejupụtara ikuku dị na mbara igwe abụghị otu. Ọ na-agbanwe kemgbe ọtụtụ ijeri afọ.
Ná mmalite nke mmalite ya, ikuku oge ochie enweghị ọdịnaya oxygen. Ọnọdụ a enweghị ike ịba ụmụ mmadụ ma ọ bụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụdị ndụ ọ bụla dị ugbu a. Naanị nje anaerobic na methanogens, ebe ọ bụ na ikuku n'oge ahụ dị oke na methane.
Ma, ebe ọ bụ na ikuku oxygen dị na mbara igwe, ọ ghọrọ otu n'ime gas na nke kachasị mkpa. Agbanyeghị, anyị ga-ahụ ihe mejupụtara ikuku n'akụkụ:
Nitrogen. Gas a bụ nke mejupụtara ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọkpụrụkpụ niile nke ikuku. Ọ dị na 78% nke ikuku ikuku. Ọ dị mkpa n'ihi na, ọ bụ ezie na ọ bụ gas na-adịghị arụ ọrụ maka anyị, ọ bụ akụkụ dị mkpa nke amino acid na nucleic acid. Ihe ndị a bụ isi maka ndị dị ndụ. Ihe mebere mmadu bu 3% nitrogen. Ọ bụ mmewere na anyị na-eku ume na kasị elu ịta ke ofụri troposphere.
Oxygen. Ọ bụ akụkụ nke ihe dị ka 20% nke ikuku anyị na-ekuru. Na nitrogen dị mkpa, oxygen bụ ihe kachasị mkpa maka ndị dị ndụ. Ọ dị mkpa iji nwee ike ịme iku ume. Anyị nwekwara ike ịchọta mmewere a n’ahụ anyị, ọkachasị sistemu iku ume.
Carbon dioxide. Ọ bụ ezie na a na-ekwusi ike na ikuku carbon dioxide na-aba ụba n'ihi mmụba nke griin haus na mgbanwe ihu igwe, ọ na-anọ naanị 0,03% nke ikuku. Ekwela ka ozi a ghagbue gị. Nchikota a kariri ihe zuru oke iji mepụta mmụba a na ọnọdụ okpomọkụ n'ụwa niile. Ọ bụ mmewere anyị na-achụpụ dị ka ngwaahịa n'efu n'oge usoro iku ume.
Mmiri. Ọ bụ ihe ọzọ dị mkpa maka ndụ mmadụ na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe ọ bụla dị ndụ. Na ikuku a na-ahụkwa ya na pesenti 0,97%. N'okwu a, anyị na-ahụ ya n'ụdị alụlụ mmiri. Enweghi ike inye uche ya nke oma n'ihi na o dabere otutu ebe anyi na-atụ ihe. Ihe ndọpụ nke ikuku mmiri na ikuku dị elu karịa ọkwa mmiri karịa oge anyị na-aga.
Noble gas dị ka ihe mejupụtara nke ikuku
Igwe ndị dị ebube bụ gas ndị na-adịghị arụ ọrụ nke na-adịghị eme ihe ọ bụla ma na-adịgide adịgide. Ọ bụghị ha niile nwere otu ọnụnọ n'ime ihe mejupụtara ikuku, mana n'ozuzu, ha mejupụtara 1% nke ihe niile. Anyị nwere gas ndị a:
Argon. Ọ bụ gas magburu onwe ya na ọnụnọ kasịnụ.
Neon. Ọ bụ ezigbo gas zuru oke na mbara igwe ma na-arụ ọrụ na ikuku.
Helio. Ọ dị ntakịrị na mbara igwe ebe ọ bụ na ọkụ ya emeela ka ọ pụọ.
Methane. Ọ bụ otu n'ime ikuku gas kachasị mkpa.
Krypton. Ọ bụ ezigbo gas nke nwere obere ọnụnọ.
Dịka anyị kwuworo na mbụ, ihe mejupụtara ikuku abughi otu ihe n'akụkọ ihe mere eme nke ụwa anyị. Ọzọkwa, anyị anaghị ekwu maka ya otu ihe ahụ na narị afọ gara aga gara aga rue ugbu a. Greenhouse gas nwere ọdịnaya ọ bawanye ụba n'ihi ọrụ mmadụ. A na-emeso gas ndị a dịka mmetọ n'ihi na ha na-emetụta mmepe nke ndụ na ọnọdụ gburugburu ebe obibi.
Dika ikuku bu ihe di nkpa maka ndu nke ihe nile di ndu, mmetọ a ayi na emebi bu na emebi emebi ahu ike anyi ma na eme ka uwa karie ka anyi noo. Mbibi ikuku nwere ike ime n'ụzọ ole na ole. Agbanyeghị, nke kachasị na nke bara ụba bụ nke ihe ụmụ mmadụ na-akpata nke, ọkachasị, anyị nwere ike ịsị na ha bụ ụlọ ọrụ na njem. N'ihi ọganihu dị na sayensị na teknụzụ, kwa ụbọchị, anyị na-eziga gas ndị ọzọ na-ekpo ọkụ na mbara igwe nke na-emerụ ma na-emerụ ahụ ma ọ bụrụ na anyị na-eku ume ma kpughere ha.
Nature nwere nhazi usoro obibi nke ya, ma ọ bụrụ na ikuku gas ndị a bụ nke okike, n'onwe ya, ha nwere ike idozi ntinye uche ha ma mee ka ọ kwụsie ike oge niile. Agbanyeghị, site na ọrụ ụmụ mmadụ na ịwụfu oke na mbara igwe, n'ime iri afọ gara aga, ọ bụ ya kpatara ya okike enweghi ike idozi n'onwe ya mmejọ nke ụmụ mmadụ na-eme.
N'ihi mmetọ ikuku site na ọnụnọ nke gas ndị a na-emerụ ahụ, ikuku anyị na-eku ume na-emebi ma na-emetụta ahụike nke ihe niile dị ndụ. Ọ dị mkpa ịmata nke ahụ mmetọ nwere ike ịgbanwe ihe mejupụtara nke ikuku na mbụ, ka ikuku gas na-egbu egbu na-apụta karịa ka anyị na-eku ume. Ihe ndị a niile na-akpata nsogbu maka ahụike na ihe dị ndụ.
Enwere m olile anya na iji ozi a ị nwere ike ịmụtakwu ihe gbasara ikuku na mkpa ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Ciencia » Ngwakọta ikuku